विचित्र संसार – Jagaran Nepal
काठमाडौ । नेपालको कानुनमा एक पटक विवाह गरिसकेपछि सो पति वा पत्नीसंग डिभोर्स नगरी अर्को विवाह गर्न पाइदैन । एउटा श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को विवाह गरेमा त्यसलाई गैर कानुनी मानिन्छ । तर पनि हाम्रो समाजमा केही यस्ता परिवार छन् जसका दुई श्रीमती छन् । यसरी दुई विवाह गरेका श्रीमानलाई श्रीमतीहरुले भागवण्डा गरेको घटना सार्वजनिक भएको […]
काठमाडौं । ३४ बर्षीया लरेनले पार्टनरसँग बिहे भएको खुसियालीमा आमालाई पनिसंगै हनिमुन लैजादा जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ति साबित हुन पुगेको छ । ‘हनिमुनको समयमा ज्वाई सासु बढी नै बोल्ने गर्थे, जुन मलाई थोरै पनि मन पर्दैनथ्यो, तर मैले यो कुरा भने सपनामा पनि सोचेकी थिइनन की आफ्नै आमाले धो’का दिएर आफ्नै श्रीमानसँग विहे गर्छिन’ उनी […]
ट्युनिसियामा एक ४५ वर्षीया महिलाको प्रा इभेट पा र्टबाट श ल्यक्रियामार्फत यस्तो चिज निकालिएको छ, जुन देखेर डाक्टर पनि छक्क परेका छन् । वास्तवमा ती महिला आफ्नो प्राइभेट पार्टमा गहिरो दुखाइका कारण डाक्टर कहाँ गएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि उनको मूत्रथैलीमा गिलास अड्किएको पाइएको थियो, जसले उनलाई विगत चार वर्षदेखि पीडा दिइरहेको थियो . एक रिर्पाेटका […]
काठामाडौं । फेब्रुअरी १४ का दिन संसारभर भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस उल्लासका साथ मनाइयो। प्रेम दिवसबारे त सबै जानकार नै छन्। तर के तपाइँहरुलाई ब्रेकअप डे भ्यालेन्टाइन डेविरुद्धको दिनको बारेमा थाहा छ? हरेक वर्ष फेब्रुअरी २१ का दिन संसार भर भ्यालेन्टाइन डेजस्तै ब्रेक अप डे पनि मनाइन्छ। आजको दिन आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन […]
भनाइ छ, विवाहको लड्डी खानेले पछुताउँछन्, नखानेले पनि पछुताउँछन् । तपाईले धेरै मानिसहरु लाई आफ्नी एउटी श्रीमतीसँग रिस उठेको कुरा सुन्नु भएको होला, धेरैले २ बिहे गरेको पनि देख्नु भएको होला । तर आज हामी तपाईलाई जसको बारेमा बताउन गइरहेका छौं उनले १ होइन २ होइन ८ जना संग बिहे गरेका छन् । थाइल्यान्डका यी […]
कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि मास्कको महत्त्व बढेको छ । यस्तो मास्कको मूल्य बजारमा केही रूपैयाँदेखि बढीमा हजार छ । तर पछिल्लो समय एउटा मास्कको चर्चा चुलिएको छ, जसको मूल्य नै १५ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । इजरायलको गहना निर्माण कम्पनीले कोरोना भाइरससँग जुध्न यति महँगो मास्क बनाएको हो । मास्कमा १८ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको […]
अन्तरिक्ष यात्राको अनुभव सुनाउँदै जापानका अर्बपति मइजवा भन्छन्, बुलेट रेलमा चढेजस्तै लाग्याे
टोकियो।अन्तरिक्षमा १२ दिन बिताएर गत महिना पृथ्वीमा फर्किएका जापानका अर्बपति युसाकु मइजवाले रोलकोस्टर चढेर पृथ्वीमा पागल हुनुभन्दा अन्तरिक्षमा रहनु आनन्दमय भएकाे बताएका छन् । ४६ वर्षीय मइजवा यही डिसेम्बरमा अन्तरिक्षमा पुगेका थिए । उनी पछिल्लो एक दशकभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक हुन् ।‘जब तपाई अन्तरिक्षमा जानुहुन्छ, तपाईलाई पृथ्वीमा दिक्क लाग्छ,’ उनले भने, […]
विश्वमा धनिभन्दा धनि व्यक्तिहरु छन् । केहीसँग यति सम्पत्ति छ कि उनीहरु आफू बस्ने घर सुन र हिराबाट बनाउँछन् भने कार पनि सुन पनि कारकै चढ्छन् । यस्तै, एक सुल्तान छन् जोसँग लगभग ७ हजार कारहरु छन् । उनीसँग भएका कार कलेक्शनमा रोल्स रोयस, मर्सिडिज, फेरारी, बेन्टले आदि छन् । उनीसँग यति सम्पत्ति छ कि […]
यदि कुनै महिलाको २५ वर्षको उमेरमा २२६ किलोग्राम तौल भयो र उनलाई कुर्सीबाट उठ्नसमेत अल्छी लाग्न थाल्यो भने उनलाई आफ्नै जीउ भारी लाग्न सक्छ । तर बेलायतकी डेलिएल बिर्चलाई भने यस्तो फिटिक्कै लागेको छैन । उनी कहिले बाथ टबमा त कहिले घरको ढोकाबाट निस्कँदा बीचमै फस्थिन्, तर उनले आफ्नो यो कुरा सबैलाई लुकाइनन् । डेनियल […]